Booranii bara hamaa fi tolaalleetti Gadaa jabeeffatee ganna dhibba hedduu oofee asiin gahe
Hagayya 24, 2011
Dr.Mohaammad Hassan:Oromoon waan Gadaan buluuf jabeenna isaa durii Afrikaa fi addunyaalleetti akkana absan.
Boorannnii eegii gadaan buluu jalqabee deemuma deemee ammaa abbaa 70-eessoo keessa jira,abbaan gadaa Booranaa ka ammaa Guyyoo Gobbaati,godaanee Liiban jira. Seeruma gadaa guutuuf ardaa jilaa jira.
Booranatti amma Gadaammojjiitti mataa buufate,maanguddootti dhaloota itti aanuu baallii kennee jechuu,dabballee,kuusaa fi raabii sadarkaa itti aanutti dabaruutti jira. Namii tokko ganna 50 kaana ammoo haga tokko ammoo 80-90tti bara Gadaammojjii isaa gaha.
Akka abbootii gadaa Booranaatti,Booranii gadaa irraa jiruu fi jireenna argate,diqqaan guddifate,guddaan bulfatee,seera diqqaa fi guddaatiin baafatee giddaahee adoo hin tahin jaalatee bara dhibbaa hedduu dhiphuu fi bali’nallee gula yaahaa bahe.Adoo gadaa qabaachuu baate silaa akkuma siyaasaa addunyaa kana dhaanee,hadhee wal balleessa
Amma Booranatti Gadaammojjii mataa buufata,Gadaammojjiin aanaa Booranaa 16tti mataa buufachuutti jirti.Aabba Waaqoo Guyyoo,gorsaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii aanaa Yaballooti.
Boorannii damee lamaa qaba;saboo fi goona,lamaanuu dameelee ufi jalaa qaba,Sabbo, Goona fuudhaa,Goona ammoo Sabboo fuudha,kun ammoo akka gochii tun soddaa fi dhala walii taatee haga duriillee caala wal ulfeessitu tolcha.Bulchiinsii Gadaa Booranaa ka ganna 8-8tti wal irraa fuudhan Gogeessa jedhama,Booranii Gogeessaa shan qaba. Bulchiinsii Gogeessa Booranaa ganna 40-40tti mare dhufa.Tanaafuu gogeessii tokko yoo marra tokko biyya bulche bulche ganna 40 eegataa jechuu.Gadaan Booranaa adoo akkana deemtuu deemuma deemtee ganna dhibbaa 600tti dhiyaatte.
Dr.Mohaammad Hassan University Georgia State Universityitti barsiisaa seenaa ti.
"Waan ufii qabaahuun biyya tokkoof,saba tokkoof jabeenna jabeenni Gadaa Oromoo Gadaa isaa keessa jira,kana qabaachuu baannaan namii nu tuffata."Akka Dr.Hassaniitti manneen barumsa Oormiyaatti Gadaa barsiisuu dhabuun ceeraa fi fokkoo guddoo."Biyya ani jiru tanatti ijoollee aadaa isaanii barsiisan,yoo baratan achumaan nafa tolfatanii waliin jiraatan."
Mee waan nu aabba Waaqoo Guyyootii fi Dr.Mahaammad Hassan gaafanne ta qaraatii fi ta lammeessoo MP3 irraa nuu caqasaa.